IPaperbark Beach Hideaway-Harrington
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguDennis And Judy
IPaperbark Beach Hideaway yindawo entle efihlakeleyo enamagumbi amabini okulala ejonge eCrowdy Bay National Park.
Yiva impepho ebusweni bakho kwaye umamele izandi zobomi beentaka ngelixa usonwabela ikofu yasekuseni kwiveranda okanye isiselo esipholileyo emva kwemini. I-cottage ixhotyiswe ngekhitshi langoku, igumbi lokuphumla, ishawari, indlu yangasese, indawo yokuhlamba impahla, kunye iveranda. Emva kokubuya kwimini elunxwemeni yonwabele ukuhlanjululwa ngeshawa eshushu yangaphandle yabucala.
Ngomhombiso opholileyo waselwandle, ikhitshi inazo zonke iimfuno zokupheka ezine-pantry enkulu, ifriji yesikhenkcisi, umatshini wekofu yekofu (ibrand yeAldi), umpheki ocothayo, umenzi wesandwich, iti kunye nekofu. Igumbi lokuphumla lineTV enkulu ene-WIFI kunye neTelstra TV (i-Netflix ekhoyo), indawo yokuphumla yesikhumba emile okwe-L, itafile yekofu, ifan yesilingi, isifudumezi segesi. Kukho imidlalo yebhodi, amakhadi, iincwadi kunye neemagazini. Kukho amagumbi amabini okulala, elinye linebhedi yendlovukazi, kwaye elinye linebhedi ephindwe kabini kunye nelinye elinelinen entsha. Igumbi ngalinye lenze iiwodrophu ezineshelufa, indawo yokuxhoma, kunye neefeni zesilingi. Igumbi lokuhlambela langoku lineshawari yeglasi enkulu enamanzi ashushu erhasi, iitawuli ezintsha, ukuhlamba umzimba kunye nomgubo wokuhlamba umatshini wokuhlamba kunye nesomisi seenwele. Indawo yangaphandle ine-Webber BBQ, itafile kunye nezitulo kunye negadi yemifuno. Indawo yabo yokupaka iimoto kunye nesikhephe. Siyazithanda izilwanyana kwaye iilwandle zethu zinobubele kwizilwanyana zasekhaya.
IPaperbark Beach Hideaway ikwindawo ezolileyo yaseHarrington kufutshane nechweba, imnandi ebantwaneni. Kukho isiTshayina, isiThai
Indawo yokutyela, iivenkile ezimbini jikelele, izinto ezithathwayo, ivenkile yePizza, iivenkile zekofu, indawo yokubhaka, IGA, iikhemisti ezimbini, ibhula, iHarrington Hotel, iBowling Club kunye neHarrigans Irish Pub zonke zinembono zamanzi kunye neebhasi zembeko. Ukuqhuba okufutshane kuya kukusa eCrowdy Bay Beach (egadiweyo ngexesha lonyaka) ikhefi ebonelela ngokutya okumnandi kunye nekofu. Kukho izibuko lesikhephe elinendawo yokuthambeka yesikhephe kunye ne4WD yokuqhuba elunxwemeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Dennis And Judy
Siya kufumaneka ukuba sisekhaya kwaye siqhagamsheleka nge-imeyile nangefowuni.
UDennis And Judy yi-Superhost
Inombolo yomthetho: PID-STRA-10965
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Harrington